Screenshots တွေကို တစ်ဆက်တည်း တွဲစပ်ပေးမယ့် Stitch It! – Screenshot Editor – AsiaApps
April 23, 2018 April 23, 2018 MoonReviewsNo Comment on Screenshots တွေကို တစ်ဆက်တည်း တွဲစပ်ပေးမယ့် Stitch It! – Screenshot Editor
ဖုန်းထဲက Gallery ထဲမှာ နေရာ အမြဲတမ်းယူထားတတ်တဲ့ screenshots တွေရဲ့case ကလည်း တော်တော်လေးကို ဖြေရှင်းရခက်ပါတယ်။ တစ်ခုနှစ်ခုဆိုရင်သိပ်ပြီး မသိသာပေမယ့် screenshots တွေများလာရင် ဘယ်ဟာကို ဘယ်လို ရှာလို့ ရှာရမှန်းမသိတော့တာ လူတိုင်းလိုလို ဖြစ်ဖူးကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ အခုမိတ်ဆက်ပေးမယ့် application က screenshots တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးကြုံလေ့ကြုံထရှိတဲ့ ပြဿနာတွေကို ဘိုင့်ဘိုင် လုပ်လို့ရအောင်ကူညီပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
Stitch it! က တစ်ကွဲတစ်ပြား တစ်ပုံစီဖြစ်နေတဲ့ screenshots တွေကို တစ်ဆက်တည်းဖြစ်သွားအောင် လုပ်ပေးနိုင်တဲ့အတွက် ဓာတ်ပုံ တစ်ခုတည်းနဲ့ screenshots ၄၊ ၅ ခုကို တစ်ဆက်တည်း ကြည့်နိုင်မှာပါ။ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ တစ်စုတစ်စည်းတည်းဆိုတော့ ကြည့်ရတာလည်း ပိုပြီး အဆင်ပြေတာပေါ့နော်။
အခြား Application တွေဖြစ်တဲ့ facebook , Messenger , WhatsApp , Twitter တို့နဲ့လည်း အသုံးပြုလို့ရတာကြောင့် facebook မှာ screenshots တွေတင်ရင် အရင်လို တစ်ပုံချင်းတင်နေစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့နော်။ သူငယ်ချင်းတွေကို ဆေးထိုးချင်တဲ့ screenshots တွေကို messenger ကနေလိုက်ပို့ရင်လည်း တစ်ပုံချင်း ပို့နေဖို့ မလိုတော့ပါဘူး။ တစ်ပုံတည်းနဲ့ အတွဲလိုက်ဝေမျှလို့ရပါပြီ။
အကြောင်းအရာတစ်ခုကို တစ်ဖြတ် တွဲစပ်လို့ရတဲ့ အတွက် ကျောင်းက သင်ခန်းစာတွေ ၊ presentation အကြောင်းအရာတွေကို လည်း မရောမနှောပဲ Gallery ထဲ သိမ်းပြီး လေ့လာလို့ရပါတယ်။ မလိုအပ်တဲ့ အပိုင်းတွေကို ဖြတ်ညှပ်ကပ် crop လုပ်ပစ်လို့ရတဲ့အတွက် အရင်ကထက်ပိုပြီး ပိုပြီး ကျစ်ကျစ်လစ်လစ်လေးဖြစ်နေမှာပါ။
အသုံးပြုနည်းက အရမ်းကို ရိုးရှင်းပါတယ်။ ရိုက်ယူထားတဲ့ screenshots တွေကို ကိုယ့်စိတ်ကြိုက်ပြန်ပြီး edit သို့ crop လုပ်လိုက်ရုံပါပဲ။ အောက်မှာ အသုံးပြုနည်း ဗီဒီယိုလေးပြပေးထားပါတယ်။
Android, iOS နှစ်ခုစလုံးနဲ့ အခမဲ့ဒေါင်းလုတ်လုပ်ပြီး အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ မိတ်ဆွေက Screenshots တွေကို သိမ်းထား တတ်တဲ့ သူဆိုရင်တော့ ရှိကိုရှိထားသင့်တဲ့ app လေးပါနော်။ ဖိုင် size ကလည်း တော်တော်လေးကိုသေးပါတယ်။ Android မှာ 4.5MB နဲ့ iOS မှာ18.2 MB ပဲရှိပါတယ်။
OnePlus6Avengers: Infinity War limited-edition ရဲ့စျေးနှုန်း နဲ့ ပုံရိပ်တွေထွက်ရှိလာပြီ